NANOSTUDIO 1.42 FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Ngwaọrụ ọ bụla kwesịrị ịhọrọ onye ọkwọ ụgbọala n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji hụ na ọ dị mma. Taa, anyị ga-ajụ ajụjụ maka ebe ịchọta na otu esi arụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka draịvụ My Passport Ultra.
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka My Passport Ultra
Enweghị otu nhọrọ nke a ga-eji mee nchọpụta maka ngwanrọ maka ụgbọala a kapịrị ọnụ. Anyị ga-ege ntị nke ọ bụla ma tụlee ya n'ụzọ zuru ezu.
Nhọrọ kachasị mma bụ ịkọwa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ. Ya mere, ị ga-ebudata ngwanrọ dị mkpa maka ụgbọala gị na sistemụ arụmọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, n'ụzọ dị otú a, ị na-ewepụ ihe ize ndụ nke ibunye kọmputa gị.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịga na ebe nrụọrụ weebụ na-emeputa ihe site na iji njikọ a nyere.
N'elu aka nri n'elu peeji nke na-emepe, ị ga-ahụ bọtịnụ "Nkwado". Pịa ya.
Ugbu a na n'elu panel nke ibe na-emepe, chọta ihe ahụ "Download" ma mee ka cursor gị. Nchịkọta nhọrọ ga-egosi ebe ịkwesịrị ịhọrọ akara. "Ngwaahịa Ngwaahịa".
N'ọhịa "Ngwaahịa" na menu ndetu, ị ga-ahọrọ ihe nlereanya nke ngwaọrụ gị, ya bụ,My Passport Ultrawee pịa bọtịnụ ahụ "Zipu".
Ngwa nkwado ngwaahịa ga-emepe. N'ebe a ị nwere ike ibudata ngwanrọ niile dị mkpa maka ngwaọrụ gị na sistemụ arụmọrụ. Anyị nwere mmasị na ihe ahụ WD Drive Utilities.
Obere windo ga-apụta na ị nwere ike ịchọtakwu ihe ọmụma zuru ezu gbasara software ebudatara. Pịa bọtịnụ ahụ "Download".
Malite na nbudata archive. Ozugbo download ahụ zuru ezu, wepụ ihe niile dị na ya na folda dị iche ma malite usoro site na ịpị abụọ na faịlụ ahụ * .exe.
Isi windo ahụ ga-emeghe. N'ebe a, ịkwesiri ịnakwere nkwekọrịta ikike. Iji mee nke a, lelee igbe ahụ pụrụ iche na akara ngosi, wee pịa bọtịnụ ahụ "Wụnye".
Ugbu a chere ruo mgbe echichi zuru ezu ma ị nwere ike iji ngwaọrụ ahụ.
Usoro 2: Nchịkọta ndị isi maka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala
Ọzọkwa, ọtụtụ na-atụgharị na mmemme pụrụ iche na-achọpụta ngwa ngwa ngwaọrụ niile jikọọ na kọmpụta ma họrọ software maka ha. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịhọrọ nke components iji wụnye na nke na-adịghị, wee pịa bọtịnụ ahụ. Usoro usoro nhazi niile nke ọkwọ ụgbọala na-ewe obere mgbalị. Ọ bụrụ na ị kpebie iji usoro nyochaa usoro nke My Passport Ultra, ị nwere ike ịchọta ndepụta nke mmemme kacha mma nke ụdị a, nke anyị bipụtara na saịtị ahụ:
N'aka nke ya, anyị ga-achọ ịdọrọ uche gị gaa DriverMax, ebe ọ bụ na usoro a bụ onye ndú n'ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala dị na ya ma na-akwado ngwaọrụ. Naanị azụghachi nke DriverMax bụ njedebe nke nsụgharị n'efu, ma nke a anaghị egbochi ịrụ ọrụ na ya. Ọzọkwa, ị nwere ike imeghachị usoro mgbe ọ bụla njehie pụtara, n'ihi na ihe omume ahụ na-emepụta nlele na-akpaghị aka tupu ịwụnye ngwanrọ ahụ. Na saịtị anyị ị nwere ike ịchọta ntụziaka zuru ezu maka ịrụ ọrụ na DriverMax:
Ihe omumu: Na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo site na iji DriverMax
Nzọụkwụ 3: Usoro nke usoro a
Ma ụzọ ikpeazụ ị ga-esi emetụta bụ itinye software site na iji ngwaọrụ Windows. Uru nke usoro a bụ na ị gaghị achọ ịnweta ngwa ọ bụla ọzọ ma budata ihe sitere na Ịntanetị. Ma n'otu oge ahụ, usoro a anaghị ekwe nkwa na ndị ọkwọ ụgbọala awụnyere ga-eme ka ọrụ ahụ dị mma. Ịnwere ike iwunye ngwanrọ maka My Passport Ultra na "Onye njikwa ngwaọrụ". Anyị agaghị eche banyere isiokwu a ebe a, n'ihi na n'oge gara aga, e bipụtara ihe ọmụma zuru ezu banyere otu esi arụnye ngwanrọ maka ngwaọrụ dị iche iche site na iji ngwaọrụ Windows.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka My Passport Ultra bụ usoro dị mfe. Naanị ị ga-akpachara anya ma họrọ ngwanrọ dị mma. Anyị na-atụ anya na isiokwu anyị enyerela gị aka, ọ dịghịkwa nsogbu gị.